ပညာတက်တစ်ဦးမို့ ဂျွန်ဝမ်း အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးတာကိုတော့ နှမြောမိတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ကလေးတွေကို ၀ိုင်းပြီးကြည့်ရူပေးမယ့်သူမှ မရှိတာကိုး။ မေလင်းလင်းလေး ကျောင်းပို့နိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်မှပဲ အလုပ်လုပ်ပါတော့ဗျာ။ အမှန်တော့ အိမ်ရှင်မအလုပ်ဆိုတာလည်း အခက်ခဲဆုံးအလုပ်တစ်ခုထဲမှာ ပါပါတယ်။ သူတို့လေးတွေကို အချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်နိုင်တာကိုက သူတို့ရော ဂျွန်ဝမ်းပါ ကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ပါ။
Thandar Lwin October 3, 2012 at 9:11 AM
ပညာတတ် မိန်းမ တယောက်ဟာ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေ အသုံးချ အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် ၀င်ငွေ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန် ကို ဆန္ဒ ရှိသလို သုံးနိုင်မယ် ။ ဒီလို ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး တွေ အားလုံးကို စွန့်လွှတ် အနစ်နာ ခံပြီး ၊ အတ္တ တွေ ကို မေ့ထားပြီး မိသားစု ကို အချိန်ပြည့် ဂရုစိုက်တာဟာ သူတို့ ဘယ်လောက် ကံထူးလဲ ။ ကိုမင်းမင်း လဲ အလုပ်ကို စိတ်ဖြောင့်၂ နောက်ဆံမတင်းဘဲ လုပ်နိုင်တယ် ။ ဂျွန် နဲ့ မေ လဲ မအေ ရဲ့ပြုစု ယုယမှူ နဲ့ သူတို့ နှလုံးသားလေးမှာ ဒဏ်ရာမရှိ ပြည့်စုံနေမယ် ။ ကျော့ ရဲ့ အနစ်နာခံမှူဟာ သူတို့အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ကျေနပ်ပြီးပြည့်စုံ စေမလဲ ။ အမ ကိုယ်ဝန် လရင့်ထဲက ကိုဦးက အလုပ်ထွက်ခိုင်းတာ အကြောင်း၂ တွေ ကိုတွေးပြီး မထွက်ခဲ့မိဘူး ။ အကြောင်း၂ တွေ ကို သူတို့ထက် ဦးစားပေးသလို ဖြစ်နေတယ် ။ ခုဆို ဟေမာ လဲ မိဘ နဲ့ ခွဲနေရတယ် ။ ဟိုနေ့ က နေမကောင်းတော့ ဘယ်သူမှ အနားကပ်မခံဘဲ မေမေ မေမေ နဲ့ ခေါ်နေတယ်တဲ့ ။ သူ ဘယ်လောက် စိတ်အားငယ်မလဲ ။ အခု အမတောင် အလုပ်ထွက်မလို့ လုပ်နေတယ် ။
JuneOne October 3, 2012 at 9:53 AM
ဟယ်ဟုတ်လား မမ။သနားပါတယ်။အဲလိုပဲ အမျိုးမျိုးတွေးပြီး ဒီလိုနေ နေရတာ။
အိမ်ရှင်မ အလုပ်က အခက်ခဲဆုံးတဲ့ မမရဲ့
မေ နဲ့ ဂျွန်လေး ကံကောင်းပါတယ် အမ။ ကလေးလေးတွေက မိခင် နဲ့ တစ်ချိန်လုံးနေခွင့်ရတယ်လေ။ အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ပဲ တန်နေပါပြီ။ နောင့် ဦးလေး ရဲ့ အမျိုးသမီးလဲ ကလေး2 ယောက်ကို အလုပ်ထွက်ပြီးအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်တာ။ ကလေးတွေက အမေ ကိုအရမ်းခင်တွယ်အားကိုးကြတယ်။ ရင်ထဲမွန်းကြပ်လာရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မေ နဲ့ ဂျွန် ရဲ့ မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် ပြေပျောက်သွားမှာပါး)
JuneOne October 3, 2012 at 12:26 PM
အမေလုပ်သူ မျက်နာထားမာနေရင် မေလင်းလင်းက မားမားစိတ်ဆိုးသွားပြီ တဲ့။သူက မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲသိတယ်။
အမရေ အပေါ်ကပြောသွားတာတွေအားလုံးကို လက်ခံပါတယ် နောက်အမြင်တမျိုးကပြောကြည့်ချင်တယ်
ကလေးတွေနဲ့ သူတို့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားလေးဘဲ တူတူနေနိုင်တာပါ ဆယ်ကျော်သက်တွေဖြစ်လာရင် မိဘနားလဲသိပ်ကပ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
ကြီးလာလို့ တနယ်တကျေးမှာပညာသွားသင်တာတို့ဘာတို့ရှိရင်လဲ ခွဲရဦးမှာပါ
JuneOne October 3, 2012 at 12:20 PM
ဟုတ်တယ် တစ်ခါတလေ အဲလိုတွေးမိတယ်။အိမ်ကလူကတော့ အသက်ကြီးလာရင် ငါတို့၂ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့မှာတဲ့။
You should treasure your current life. If you work, you need to send them to child care for the whole day. It'll cost you alot & it is better to keep the children under mother's supervision than strangers. If you call maid, you don't haveafamily privacy. I haveamaid. When we are around, she is ok. When we go to office, she has no patience to my kid. It is not easy to getaperfect maid. Everything has pros & cons. If your hubby income is enough to cover your house expense, my suggestion is 'Pls take care your kids at home'.
JuneOne October 3, 2012 at 12:17 PM
Thanks for your comment and encourage to me..I will do the best for them.
:P October 3, 2012 at 1:06 PM
အိမ်ရှင်မ တစ်ဦး တိတ်ဆိတ်စွာ ဖတ်ရှုသွားပါသည်။.
Good to beaperfect mother but all obtained degrees are wasted. Pros and cons
JuneOne October 3, 2012 at 11:14 PM
ဟုတ်တယ် အဲဒါအမှန်ဆုံးပဲ။တစ်ခုပဲ၇ှိတယ် သားနဲ့သမီး ကို တရုတ်စာ တစ်မျိုးပဲ ကျူရှင်ထားပြီး ကျန်တာတွေ ကိုယ်တိုင်သင်၊ကိုယ်တိုင် ဂိုက်လုပ် မလားစဉ်းစားတယ် အလုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ရင်။သူတို့လဲ ကျူရှင်ပြေးရတဲ့ အချိန်လျော့သွားတာပေါ့။